Ukuhlaziya i-Dashboard ye-SEO yeWebhu | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 29, 2009 NgoMvulo, Aprili 25, 2016 Douglas Karr
UMsunguli kunye nomphathi omkhulu u-John Rasco undibonise umboniso wenyani weSoftware engummangaliso njengeNkonzo (i-SaaS) SEO kwideshibhodi kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ngoku Hlaziya iWeb Uya kuphila ebantwini kunye nedeshibhodi yabo entsha ye-SEO. I-RefreshWeb iqale yakha usetyenziso ngenxa yokudana kubaxhasi bayo kuba bengenakufumana ukujonga ngokugqibeleleyo kuyo yonke imilinganiselo yegama eliphambili ekujolise kulo kwintengiso yokukhangela.
Zintathu izinto ezibalulekileyo ekujongeni umkhondo weinjini yokukhangela… umthamo wophando kwigama elingundoqo, lakho isikhundla sangoku kunye nemiqulu (kunye nesabelo esihambelanayo), kunye neyakho isikhundla sembali (nokuba uyafumana okanye uyalahlekelwa ngumhlaba). Ngokwazi kwam, ayikho enye imveliso kwintengiso ejonga ukukhangela njenge 'ntengiso' kwaye iguqulele inqanaba lakho kwintengiso isabelo. I-RefreshWeb ikwenzile oku ngendlela elula kodwa enamandla yokunika ingxelo.
Ngobuchule bokwakha uluhlu lwamagama aphambili ezijolise kwiinjongo zakho zokuthengisa, ungafumana isiphatho kwimpembelelo onayo kwimizamo yakho. Akusekho kuphinda kuqokelelwe kwimfumba yedatha. Uyakwazi ukubona ukuba irenki ziphucuka njani ekuhambeni kwexesha kwaye apho kulindwe khona amathuba amatsha okukhula. I-Dashboard ye-RefreshWeb SEO yoLawulo ilanda umkhondo we iimetriki ezibalulekile:
Ukufikelela kwintengiso kuzo zonke iinjini zokukhangela ezi-5
Isoftware yokunika ingxelo ye-SEO yedatha yangoku kunye nembali
Ukwahlulahlula iinjini zokukhangela eziphambili ezi-5 ezihambelana nomthamo wokukhangela
Ingxelo ephambili yokuhambahamba enegama elinenkcazo ngaphandle kwengxelo
Ubunzulu be-SEO kubahlalutyi kwigama ngalinye elingundoqo
Iingxelo ezintlanu ziza kumgangatho kunye ne- $ 250 ngenyanga yephakheji (ihlaziywa ngeveki):
The I-TASMReach Ngaba likhasi lasekhaya lomxhasi (Iyonke iMarike yokuKhangela eFumanekayo? I-TASM?). Ibonisa ipesenti ye-TASM efikelelweyo kunye nevolumu yangoku yokukhangela kwikota nganye. Ukulungiselela ixesha kwitafile kukuqaqambisa kwitshathi.
The Ubume beGoogle isebenzisa itekhnoloji efanayo ukubonisa iziphumo, kodwa ujonge irenki endaweni yokufikelela. Zonke ezi-5 zeenjini eziphambili zase-US ziyalandelwa.
The SEOProgressReport Thelekisa iziphumo kuyo nayiphi na imihla emibini kwinkqubo, kunye negrafu yebha ephezulu emele ukuzuza kunye nelahleko. Ukuqaqambisa ibha kwigrafu yebar kubonisa ixesha lokukhangela elinxulumene nesiphumo.
The Igama eliphambili ingxelo ikunike isishwankathelo senzuzo kunye nelahleko yomhla wangoku, ngamagama aphambili aqhagamshela kwi-5-iveki yokulandelela inqanaba, ukuze ubone ukuba imeko iya phezulu okanye iphantsi. Uluhlu lweeveki zalo naliphi na ixesha elinokutshintsha, ngokusekwe kwizinto ezinje ngamaziko edatha kaGoogle ahlukeneyo ase-US e-US, apho iGooglebot ikwisalathiso, njlnjl. une anomaly okanye ingxaki.
The IsishwankatheloUthelekiso Itshathi sisixhobo esihle sokubonisa inkqubela phambili yolawulo ekuhambeni kwexesha, kodwa isishwankathelwe ngokwemigaqo iyonke kudidi ngalunye lodidi. Oku kunceda ukugcina ingxelo ikwinqanaba eliphezulu. Zonke iinkcukacha ziyafumaneka ngenkqubo, kodwa kunzima kumntu ongayazi i-SEO okanye umsebenzi oqhubekayo wokusebenzisa ulwazi lwegranular.
I-Dashboard ye-RefreshWeb SEO yoLawulo yakhiwa ngabathengisi bewebhu kubathengisi bewebhu. Isixhobo esinamandla sokulawula i-SEO esilungelelanisa ukuhamba kwakho kunye neengxelo zolwazi olubalulekileyo kwi-SEO kubahlalutyi ngeendlela eziluncedo nezisebenzayo. Ungajonga ividiyo kwinkonzo ye-RefreshWeb njengokuba.
Ubhaliso lwenqanaba legolide luza nenkxaso esekwe kwi-imeyile evela kubathengisi bokwenyani kwiqela le-RefreshWeb. Ingcebiso ngengcali evela emseleni kunye nesixhobo solawulo se-SEO esenziwe ngoochwephesha kwezentengiso engqondweni? Yindibaniselwano enzima yokubetha. Yazisa uJohn ukuba ufunda iposti apha Martech Zone!
tags: Uhlobo lwegoogleigama eliphambili elihamba phambiliukuvuselela iwebhuIngxelo yenkqubela phambiliIsixhobo seo sokuhlaziya iwebhu seotasmreach
Uhlalutyo lokuthengisa kwangaphambili kunye ne-ThinkVine
Okt 30, 2009 ngexesha 10:38 AM
Wowu, ndiyazi umphathi wam uya kuba nomdla kule software intsha! Ndizothumela le posi kuye, enkosi ngolwazi, ijongeka intle!
Oktobha 30, 2009 ngo-7: 47 PM
Ideshibhodi ye-RefreshWeb SEO ngokuqinisekileyo inomdla kwaye iluncedo. Ujongano olucocekileyo lubonisa abaphathi beemetrikhi ngendlela yabo enengqiqo yokuqhuba isenzo. Ndiyisebenzisile kwaye ndiyayithanda.
Nov 4, 2009 kwi-4: 05 AM
Ndicinga ukuba baphambi kwekhava, ngokunjalo, ekujongeni uPhando ngombono 'wesabelo sentengiso'. Siza kuba lapho sonke ekugqibeleni-kodwa kulungile ukubona umntu ephuma phambili!
Nov 2, 2009 kwi-2: 17 AM
Ijongeka intle! Ndiza kuyigcina kwideshibhodi yakho ye-SEO kuluhlu lwam olushushu lwabathengi.
Abantu kwiRefreshWeb bakulungele ukusebenza kunye @Kryanoutloud